lahatsoratra 85 018 amin’ny teny malagasy
Ny konkordisma dia fivoasana ny bokim-pinoana izay anaovana fahadihadiana ny soratra masina ao aminy mba tsy hampifanohitra azy amin’ny fahalalana siantifikan’ny vanim-potoana iray. Amin’ny alalan’ny fivosana ara-bakiteny na amin’ny alalan’ny fanakaran-kevitra lalina kokoa ilay soratra masina no anatanterahana ny fanamarinana ara-tsiansa. Tsy voatery hisy fifandraisany anefa ny voalazan’ny soratra masin’ny fivavahana iray sy ireo petra-kevitra siantifika na dia mifanindran-dalana eny ihany aza. Ny Baiboly sy ny Koràna no matetika anaovan'ny mpanao heviteny fivoasana araka ny konkordisma. Ny fivavahana bodista sy hindoa koa dia ahitana betsaka ny fivoasana ny boky masiny araka ny konkordisma. (tohiny...)
Mitranga amin'izao fotoana izao : Ady an-trano fahatelo ao Santrafrika, Krizy politika ao Tailandy, Ady an-trano ao Siria, Fanjavonan'ny sidina MH370, Fikorontanana ao Okraina, Krizin'ny trosa ao amin'ny Faritra Euro [ovaina]
Alakamisy, 19 Jolay 2018
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Alakamisy 19 Jolay ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.
Amin'ny fiteny afrikana : — Afar — Afrikaans — Akan — አማርኛ — Bamanankan — Chi-Chewa — chiTumbuka — Fulfude — Gĩkũyũ — Hausa / هَوُسَ — Igbo — isiXhosa — isiZulu — Kanuri — Kinyarwanda — Kirundi — Kiswahili — Kongo — Kuanyama — Lingala — Luganda — Malagasy
Hita tao amin'ny "https://mg.bywiki.com/w/index.php?title=Wikipedia:Fandraisana&oldid=809038"